Gbanye Shop: Zụọ Ọrụ ma ọ bụ Ngwaahịa Can Pụrụ Sharekekọrịta, maka Ihe You Chọrọ | Martech Zone
Monday, April 27, 2020 Monday, April 27, 2020 Douglas Karr
Ka ụwa na-abanye na enweghị mgbagwoju anya, ụlọ ọrụ kwesịrị ilekwu anya na ego na-akwụ ma zere mmefu ọ bụla na-enweghị isi. Otu usoro nke nwere ike inye aka bụ ịzụ ngwaahịa na ọrụ gị maka akụrụngwa ịchọrọ. Achọrọla m ndị ahịa tupu na ọrụ m nwere ike iji ma na aka ọrụ ma ọ zọpụtara m obere ego karịa afọ.
Ọrịa coronavirus dị ugbu a buru amụma na ọ ga-efu akụ na ụba ụwa Njeri puku 1 na 2020, ma tinye nrụgide na-enweghị atụ na ụlọ ọrụ na ụdị azụmahịa niile. Nsogbu a emeela ka ọtụtụ ndị nwe ụlọ ahịa gbanwee ụdị ọrụ na-akwụ ụgwọ ma kwụsịkwa ị nweta ego.
Mee ka ụlọ ahịa gbanwee
Achọpụtala m na azụmaahịa ndị a na-ere ahịa bụ azụmahịa siri ike, n'agbanyeghị. N'aka nke m, ekwesịrị m ịnyefe ihe karịrị atụmanya iji jide n'aka na onye natara ya nwere obi ụtọ na nsonaazụ ahụ. Na, atụmanya m dị ka onye ọlụlụ bụ na ị ga-eme otu ihe ahụ. M na-abịa na raw isi nke osisi a di na nwunye ugboro ebe na-eweta ọrụ kwuru ihe yiri nke ahụ, “Ọfọn, ị naghị akwụ ụgwọ maka ya…“. Ouch ... na okwu ọzọ… maka na ị kwụrụ ụgwọ n'oge na akụrụngwa na ọ bụghị ego, anyị echeghị na ị kwụrụ. You're ga-akpachara anya na azụmaahịa ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ị gbanwere.
Ikekwe, Mee ka ụlọ ahịa gbanwee ga - enyere aka na sistemụ ahia ha n'ịntanetị.
Kpọsaanụ, PR gị n'ụlọnga maka tech oru mmalite, taa ọkwa na mwepụta nke Mee ka ụlọ ahịa gbanwee. Ebe a na-ere ahịa n'ịntanetị na-emepụta ụzọ ọzọ maka azụmaahịa na ndị ọchụnta ego n'ụwa niile iji nweta ngwaahịa na ọrụ site na usoro mgbanwe.
Ikpokoro dị n'ịntanetị zuru ụwa ọnụ nwere ndepụta nwere onyinye na arịrịọ ndị ezitere. Ndị na-agbanwe agbanwe nke nwere ihe ha ga-ebu ụzọ mee ka ha nwee ike mepụta akaụntụ ma bipụta nkọwa nke onyinye ahụ, yana 'rịọ' maka ihe ha chọrọ na nloghachi, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla. Onye ọ bụla nwere ike ịchọgharị na ikpo okwu na azụmahịa ndị a na-enye. Ozugbo email jikọtara ndị email ahụ, ọ ga-eme ka ndị abụọ ahụ mechie azụmahịa ahụ.
Publiclọ ahịa Swap wuru ụlọ ọrụ Mgbasa ozi dị ka ụzọ iji kwado ụlọ ọrụ ntanetị na mmalite site na imepụta oghere ebe ndị ọchụnta ego nwere ike ịrịọ maka enyemaka mgbe ha chọrọ ya, kamakwa inye aka.
Achọpụtala m mmalite mmalite iji nwee mmetụta dị egwu nke obodo, yana nnwere onwe enwere nnwere onwe, ngwanrọ ngwanrọ na-emeghe na oghere ndị ekpughere na iyi iyi. Ihe ndi ozo choro obodo a ugbu a karia mgbe obula, ya mere anyi kpebiri ịmalite tolọ Ahịa Mgbasa Ozi na-atụ anya na anyị nwere ike ime obere akụkụ anyị iji nyere aka.
Erik Zijdemans, Onye isi oche nke ọrụ na mgbasa ozi
Ndị obodo emeela ngwa ngwa itinye aka na ọtụtụ onyinye nnụnụ izizi na tebụl. Ndị Swappers enweela ohere ịrịọ maka ngwa Nerdytec kachasị ọrụ n'ụlọ, ihe eji eme mmekọrịta ndị na-ege ntị na Riddle, yana ọrụ ebook site na Mgbasa ozi.
Mgbasa ozi mepụtara ikpo okwu iji mepụta ụzọ dị mfe ma nwee nchedo maka azụmaahịa jikọọ, mana mkparịta ụka na nkwekọrịta nke azụmaahịa a hapụrụ ndị ọzọ.
Lelee Enyele Mepụta onyinye
Tags: ịzụ ahịakpọsaanụgbanye ahịaahiaahia ngwaahịaọrụ ahia